Howlgalo laga sameeyey Degmada wanleweyn oo dhalinyaro badan lagu soo xirxirey | Daafeet	Friday, October 21st, 2016	Home
Howlgalo laga sameeyey Degmada wanleweyn oo dhalinyaro badan lagu soo xirxirey
Dec 11, 2012 - Aragtiyood	virtual roulette gameCiidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada Wanlaweyn ee degmada Shabeellaha Hoose waxay ku soo xireen 12 dhallinyaro ah oo lagu tuhmayo inay wax ka ogaayeen qarax shalay halkaas ka dhacay.
Guddoomiyaha degmada Isaaq Maama ayaa sheegay in dadka la xiray lala xiriirinayo qarax loo adeegsaday bambada gacanta laga tuuro oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladdawatch keno live online queensland.
Isaaq wuxuu intaas ku daray in dhallinyarada lagu qabtay howlgalka lagu xiray saldhigga magaalada si loogu sameeyo baaritaan dheeraad ahtop ten best online casinos.
Si kastaba arintu ha ahaatee qaraxan shaley ka dhacay decmada ayaan geysan wax dhibaato ah balse ujeedada howlganka ayaa ah mid lagu sugayo amaanka degmada si eysan u dhicin qaraxyadan oo kaletop casino sites uk.
Daafeet.Comtop 10 bonus casinos
Fadlan Riix hoose hadaad tahay ilbaxonline live roulette game	online kenoWARARKII KU DHAAFAY	Shariif Xasan oo ku Dhiiran Waayey Inuu ku Dhawaaqo inuu Yahay Mushax Madaxweyne